Miaraka amin'ny geocaching, mandrisoa ny ovy fandriana hitrandraka zava-boahary
Geocaching no fihazana harena maoderina
Nisy ny fialamboly taloha ho an'ny faritra ivelany izay tsy nitaky fitaovana teknika lehibe. Tsy hetsika tsy dia fahita fotsiny toa ny mitaingina bisikileta na scooter na mandresy tilikambo fiakarana eo amin'ny kianja filalaovana traikefa. Tena nahafaly indrindra ny nahita zavatra toy ny fihazana scavenger na ny fanarahan-dia any anaty ala any ambony. Ary ny fitomboana ankehitriny dia antsoina hoe geocaching.
Mivoaha amin'ny natiora miaraka amin'ny geocaching
Ny zazalahy manokana dia nahita fa tena nahafinaritra, satria afaka nanome malalaka ny hetahetany hanao traikefa nahafinaritra kely izy ireo.
Ankehitriny, ny hetsika toy izany dia mahalana no mamoaka zaza hivoaka ny efitrano; ny ankamaroan'izy ireo dia aleony mandany ny fotoana malalaka amin'ny solosaina na eo alohan'ny fahitalavitra.
Matetika ny ray aman-dreny dia tsy mieritreritra fa tsara izany, saingy tsy tena fantany izay azony atolotra ny zanany hametrahana ny haino aman-jery nomerika any aoriana.
Mazava be ny valiny: ny fampifangaroana ny haitao sy ny tena traikefa nahafinaritra dia miasa ihany koa ho an'ny ovy fandriana!
Raha atambatra amin'ny haino aman-jery nomerika ny traikefa nahafinaritra, ny karazany ary ny fientanam-po, na dia ny ovy fandriana lehibe indrindra aza dia ho voatarika tsy hanana tahiry.
Ao amin'ity karazana fihazana harena maoderina ity, fitaovana fitetezam-paritany no ampiasaina hitadiavana toerana miafina izay efa namboarina mazava ho azy.
Ka io toerana miafina io dia mety ho hitan'olona hafa koa, omena ny fandrindrana. Noho io antony io ary mba hahomby ny fihazana harena, dia tokony hisy fitaovana fitetezana na fitaovana GPS na fampiharana iray ao amin'ny finday avo lenta.
Toy ny fitsipika, ny harena hafenina dia arotsaka ao anaty kaontenera iray izay alevina amin'ny tany avy eo. Mety ho zavatra rehetra izany, miankina amin'ny vondrona kendrena tianao hisarika anao.
Saingy mazava ho azy fa tsy mila mpitsikilo ianao vao hahalala hoe aiza no miafina harena toy izany, fa aleo vakiana amin'ny vavahady an-tserasera manokana. Ny fisoratana anarana haingana dia ampy handray anjara amin'ilay fialamboly vaovao. Mandritra izany fotoana izany, nanjary malaza be ny geocaching hany ka misy ny fitaovana mifandraika amin'ity lohahevitra ity izay azo vidiana mora azo.
Miankina amin'ny firafitra, ny seta toy izany dia misy ny kaontenera, boky mirakitra penina, ary angamba fitaovana GPS na zavatra hafa manan-danja sy ilaina. Koa satria ny geocaching izao dia tanterahina amin'ny "karazany" samy hafa, ny tsenan'ireo entana mety dia nanjary isan-karazany.
amin'ny Geocache no anaran'ny kaontenera izay afenina ny logbook sy ny zavatra hafa mety. Raha vantany vao misy olona mitatitra geocache miafina amin'ny vavahady iray, dia ampandehanan'ny mpandraharaha tranokala ity ary hitan'ny mpampiasa hafa avy eo. Azonao atao izao ny manoratra ireo fandrindrana ary manomboka mijery. Raha mahomby ilay zavatra hita dia miditra amin'ny log ao amin'ny geocache sy amin'ny lisitry ny lozisialy ao amin'ny tranokala ianao.
Izay rehetra mifandraika amin'ny geocaching dia mety ho hevitra tsara omena. Raha te-hanome fanomezana manokana ianao dia azo antoka fa hahita tolo-kevitra marobe amin'ity faritra ity.
Na izany na tsy izany dia manome fahafinaretana be ho an'ny mpandray anjara rehetra ary na dia ny fahafaha-mavitrika amin'ny faritra ivelany aza.
Zava-dehibe ny fitafianao mifanaraka amin'izany, satria tsy ho mora idirana na aiza na aiza ny geocache. Toy ny mitranga amin'ny harena, matetika izy ireo dia hita amin'ny toerana tsy afaka na sarotra. Izay nankafy azy dia afaka mampitombo amin'ny fampiasana ireo safidy isan-karazany. Tsy ny fitadiavana mora fotsiny, fa koa ny ambaratongam-pahasarotana atolotra, izay mampitombo ny lohahevitra mahaliana ifotony.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 2. September 2020 15. Jolay 2021 Sokajy Fialam-boly & fialambolyKeywords fialam-boly, geocaching, toetra, Fihazana harena, fikarohana
indray Lahatsoratra taloha: Torohevitra fanomanana | VELONA
more Lahatsoratra manaraka: Zana-tsipìka | fanatanjahan-tena